Posted by Tranquillus | Jan 11, 2019 | Xirfadaha hadalka iyo qoraalka afka
Deegaanka ganacsiga ee maanta halkaas oo iimaylka uu noqday aaladda isgaarsiinta ee la door biday. Waa lama huraan inaad barato xirfadaha lagama maarmaanka u ah gudbinta fariimahaaga. Waxaa jira siyaabo badan oo aad ugu gudbin karto farxad la'aantaada saaxiibadaada oo aad isku dhacdeen si uun ama si kale. Waxaad qiyaasi kartaa dood fool ka fool ah, taleefan, ama nooc dhexdhexaadin ah. Si kastaba ha ahaatee, theemail ayaa weli ah mid ka mid ah hababka ugu badan ee loo isticmaalo adduunka shaqada.
Email waa qalab aad u xoog badan oo loo isticmaalo sababo badan.
Markaad soo dirto email, waxaa jira duubis toos ah oo ku saabsan isgaadhsiinta. Sidaa daraadeed, isweydaarsiyadaada kala duwan ayaa lagu abaabuli karaa faylka si badbaado leh. Sidaas awgeed waa loo isticmaali karaa mustaqbalka wixii tixraac ah ama sababo sharciga ah. Isticmaalka email ahaan habka isgaadhsiinta rasmiga ah wuxuu sidoo kale kaydiyaa ganacsiyada lacagta. Waa muhiim in la xusuusto qodobbadaas si aad u fahamto sida ay muhiimka u tahay adiga inaad ku guulaysato habkan qaabka isgaarsiinta.
Shaqo-maalmeedkaaga, waxaa dhici karta in jaallahaagu u baahan yahay xusuusin xeerarka qaarkood ee dhaqanka wanaagsan inuu yeesho. Waa wax xiiso leh in la xasuusto in ogeysiiska qofka aad wada shaqeysid emayl ahaan uu yahay hab rasmi ah oo wax ku ool ah si aad fikraddaada ugu gudbiso si adag. Haddii saaxiibka noocaas ahi go'aansado inuusan beddelin dabeecadooda digniino isdaba-joog ah ka dib, emayllada aad soo dirtay ayaa loo soo bandhigi karaa si ay dammaanad uga qaadaan tallaabo dheeraad ah dhinacaaga. Xusuusnow in si aamin ah loo keydiyay oo dib loogala soo bixi karo loona isticmaali karo in lagu muujiyo taariikhda dhaqan xumada shaqsiga.
READ Iimayl xirfad leh, iska ilaali qaacidooyinka la yaqaan!
Ka hor intaadan ogeysiinin asxaabtaada e-mail
Sida kor ku xusan, isticmaalka emailka ee isgaarsiinta waa mid rasmi ah. Tani waxay tusinaysaa in miisaankiisu ka badan yahay digniin afka ah oo leh cawaaqib kale. Sidaa darteed, kahor intaan la ogeysiinin qof aad u shaqeysato email ahaan, ka fiirso digniinta hadalka. Qaarkood waxay la qabsadaan dabeecadooda markaad sameyso. Sidaa daraadeed, lagama maarmaan la'aan markaad raadineysid xalinta dhibaatada, si aad u siiso miisaan aan faa'iido lahayn. Intaa waxaa dheer, in la ogeysiiyo asxaabta emailka ah e-mail maaha marwalba inay ahaato habka ugu fiican ee lagu dhaleeceyn karo saaxiibka inuu bedelo. Daawee kiis kasta iyo mid kasta sida ku xusan xaaladda. Ka hor inta aadan caddayn karayn e-maylkaaga, waa inaad ogaataa sida loo sameeyo. Waxaad u baahan tahay inaad soo ururiso fikradahaaga iyo inaad ogaatid waxa aad rabto inaad qorto iyo heerka saameynta aad u baahan tahay si aad u gaarto natiijada la rabay.
Waxa ugu horreeya ee la sameeyo ka hor intaadan dirin emaylkaaga waa in la garto mawduuca xanaaqaaga. Ma fududa sida ay u muuqato. Xafiis ay ku yaalliin tartan iyo xafiiltan, waxaad u baahan tahay inaad hubiso in eedeymahaagu ay leeyihiin aasaas culus. Uma baahnid inaad ku xanuujiso xubin ka tirsan kooxdaada xanta. Si kastaba ha noqotee, haddii aad tahay dhibbane ama markhaati u tahay anshax xumo xaqiiqooyinkuna yihiin kuwo la hubo, tallaabo qaado. Si kastaba ha noqotee, ha ilaawin jidadkaaga si aad ugu hogaansanaato xeerarka asluubta caadiga ah.
Waa kuma qofka aad la kulantay dhibaato?
Tusaale ahaan, adiga iyo kooxdaagaba wax wanaagsan uma qabanayaan khilaafka adiga iyo maamulaha. Tani waxay si dhab ah u saamayn doontaa wax soo saarkaaga waxaana laga yaabaa inay kugula taliso xaalad xasaasi ah. Halkii email ah, ka feker inaad is-bar-bar-waji aad u sii caawin karto marka hore si aad wax uga qabatid dhibaatada kaa haysata. Si kastaba ha noqotee, haddii wadahadalka wejiyada foolxumada iyo ciil-celinta afka ah ay ku fashilmaan, ha ka baqin inaad dirto emayl rasmi ah oo dhab ahaantii faa'iido kuu leh.
E-mailkaaga waa in lagu qoro xirfad ahaan. Marka aad qaadato hindisaha lagu dhaleeceynayo akhlaaqda ama shaqada shaqsi gaar ah e-mail, xasuuso in tani ay tahay dukumiinti rasmi ah. Waxay micnaheedu tahay inay tahay dukuminti kaa soo horjeeda. Xushmee dhammaan xeerarka la filayo si ay u qoraan warqad ku jirta macnaha guud.
Isticmaal email email Janaayo 11th, 2019Tranquillus
horeXasuusinta muuqaalka cybercourtoisie
socdaWaxa aad u baahan tahay inaad ka ogaato xannibidda
Mashruuca Kala-guurka Xirfadlaha ah:
Template warqad: codso magdhowga kharashyada xirfadeed
Email template si aad uga jawaabto codsiga macluumaadka qof ka mid ah saaxiibka